IObit Smart Defrag Pro 5.8.6 ( Free License Giveaway ) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Computer software Giveaway Utilities IObit Smart Defrag Pro 5.8.6 ( Free License Giveaway )
IObit Smart Defrag Pro 5.8.6 ( Free License Giveaway )
Maung Pauk at 8:28:00 PM Computer software, Giveaway, Utilities,
Windows မှာ Defrag လုပ်ဖို့ Built-in ပါလာပြီးသားပါ.. ဒါပေမယ့် ကိုယ့် HDD ပမာဏ သိပ်ကြီးနေတယ်၊ ဖိုင်တွေကလည်းများတယ်ဆိုရင် built-in Dfrag နဲ့ ကြာပါတယ်.. အဲဒီအတွက် IObit Smart Defrag က မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အဆင်အပြေဆုံး ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.. Defrag လုပ်တယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့စဉ်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုကြတဲ့အခါ System ဖိုင်တွေမှာ သူ့နေရာနဲ့သူ အစီအစဉ်တကျမရှိ၊ Data တွေကို ဖျက်လိုက်/သိမ်လိုက်နဲ့ အစီအစဉ်တကျမရှိတာတွေကို အစီအစဉ်တကျ ပြန်လည် စီပေးတာဖြစ်ပါတယ်.. လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေ နေရာတကျမရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ နေရာတကျ စီစဉ်ပေးတာနဲ့တူပါတယ်..
1. အောက်ကလင့်မှာ Setup ဖိုင်ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ..
2. အောက်က လိုင်စင်ကီးကို အသုံးပြုပြီး 19.99 ဒေါ်လာတန် iObit Smart Defrag Pro ကို ၁ နှစ်စာ တရားဝင် အလကားအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ...
License Code: 45C13-2C872-378EA-5C3B9
Windows မှာ Defrag လုပျဖို့ Built-in ပါလာပွီးသားပါ.. ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ HDD ပမာဏ သိပျကွီးနတေယျ၊ ဖိုငျတှကေလညျးမြားတယျဆိုရငျ built-in Dfrag နဲ့ ကွာပါတယျ.. အဲဒီအတှကျ IObit Smart Defrag က မွနျမွနျဆနျဆနျနဲ့ အဆငျအပွဆေုံး ကူညီပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ.. Defrag လုပျတယျဆိုတာက ကြှနျတျောတို့တှေ နစေ့ဉျကှနျပြူတာကိုအသုံးပွုကွတဲ့အခါ System ဖိုငျတှမှော သူ့နရောနဲ့သူ အစီအစဉျတကမြရှိ၊ Data တှကေို ဖကျြလိုကျ/သိမျလိုကျနဲ့ အစီအစဉျတကမြရှိတာတှကေို အစီအစဉျတကြ ပွနျလညျ စီပေးတာဖွဈပါတယျ.. လုပျငနျးခှငျမှာ အလုပျလုပျကွတဲ့အခါ ကိုယျ့ပစ်စညျးတှေ နရောတကမြရှိတဲ့အတှကျ ကိုယျ့ပစ်စညျးတှကေို သူ့နရောနဲ့သူ နရောတကြ စီစဉျပေးတာနဲ့တူပါတယျ..
1. အောကျကလငျ့မှာ Setup ဖိုငျကိုဒေါငျးလိုကျပါ..
2. အောကျက လိုငျစငျကီးကို အသုံးပွုပွီး 19.99 ဒျေါလာတနျ iObit Smart Defrag Pro ကို ၁ နှဈစာ တရားဝငျ အလကားအသုံးပွုနိုငျပါပွီ...
IObit Smart Defrag Pro isapopular, efficient and award-winning disk defragmenter that provides extremely fast and efficient defragmentation to your hard drives intelligently for faster file loading and high disk performance. With the new generation of ultra-fast defrag engine, Smart Defrag5can not only defragment users’ HDD but also trim SSD to accelerate disk read/write speed and enhance disk durability. Users can easily defrag large files and consolidate free spaces with the newly added Large File Defrag and Free Space Defrag for more efficient defragmentation.
IObit Smart Defrag Pro 5.8.6 ( Free License Giveaw...
WonderFox HD Video Converter Factory Pro 15.1 ( Fr...
ကျော်ဟိန်း ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယျာဉ်မှူး ၊ နေအောင် ၊...
ကျော်ဟိန်း မွန်းတည့်ချိန်တွင်နေ၀င်သည် မြန်မာ့ခေ...
ကျော်သူ မောင်မင်းကြီးသားမောင်မြဖေ ကျော်သူ၊ လွင်မ...
ကျော်ဟိန်း တစ်ဦးကစေတနာတစ်ဦးကမေတ္တာ မြန်မာ့ခေတ်ဟေ...
ခုလို အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာ အားပေးဖေါ် သူငယ်ချင်းတွေလ...
ကျော်ဟိန်း နှလုံးသားနှင့်စစ်တာဝန် မြန်မာ့ခေတ်ဟော...
HUAWEI P20 PLUSအားလေ့လာခြင်း
ကျော်ဟိန်း မော်ကင်းဥဒါန်း စဆုံး SD 480P
ကျော်ဟိန်း - ပန်းစကား မြန်မာ့ခေတ်ဟောင်းရုပ်ရှင် Bl...
ခုံနံပါတ် မကောင်းလို့ စာမေးပွဲကျရတာကို အဖေရာ ရယ်ေ...
ချစ်ခြင်းဖွဲ့မေတ္တာ ဒွေး၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ တင့်တင့်ထ...
ချစ်လို့သာရက်စက်သည် ရယ်နေရတဲ့ ဂျပန်ဟာသတို။ �� ဘဝအေ...
HOW TO ADD PRODUCTS SHOWN TO YOUR FACEBOOK POSTS
ခရစ်စမတ်ဘိုးဘိုးကြီးလည်း သနားစရာ��ရယ်နေရတဲ့ ဂျပန်ဟ...
ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့်ကြားက ရောင်းတဲ့ခေါက်ဆွဲဆိုင် ...
ဂျပန်မှာ တက်တူးများများထိုးတဲ့သူက အကောင်ဘဲ ရယ်နေရတ...
ကလေးချင်း ပြိုင်ကြရာ အဘပါ မနေနိုင် ရယ်နေရတဲ့ ဂျပန...
ကိုယ်စောင့်နတ် မနေနိုင်ပေါင်�� ရယ်နေရတဲ့ ဂျပန်ဟာသ...
သူဌေးရုံးခန်းကို စပ်စုကြည့်သောအခါ ရယ်နေရတဲ့ ဂျပန်...
သူဌေးမှ ဘောနပ်စ် မပေးဘဲ ညစ်ထားသောအခါ ရယ်နေရတဲ့ ဂ...
ဂေါက်ဆရာဏှာပူး�� ရယ်နေရတဲ့ ဂျပန်ဟာသတို။ �� ဘဝအမောေ...